VOAFANTINA FANAMBARANA NY FAMOTSORANA - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
VOAFANTINA FANAMBARANA NY FAMOTSORANA
Fa ny rano rehefa mafana lasa etona
'Ny rano mamy misotro fa nilulunod ny amin'ny divay sy ny labiera, nakapapatay ny afoAry rehefa tezitra mivadika ho amin'ny safo-drano indraindray hanimba ny maha-olombelona sy ny gumigimbal ao amin'izao tontolo izao.' 'Ny rano, ary dia lasa etona rehefa inapuyan. Dia lasa ny safo-drano raha ny kely dia misaraka ny renirano dia ahitana mivaingana nampidina antony ao ny maimaika fotsiny ny fahorian'ny vely hinuhukay ny olona.' 'Araka ny antonony. Bebe kokoa maka anao ho any amin'ny olona miandry ao ny zava-dehibe noho ny vola folo taona indray vahiny. Alaivo sary an-tsaina fotsiny fa tsy very ny telo-polo pesos ianao lalao. Na izany'twas latsaka ao ny renirano ka nihinana ny mamba. Izaho ilay iray izay tonga telo ambin'ny folo taona lasa izay, marary ka tsy afa-manoatra endrika, mba hanome ny farany fanomezam-boninahitra lehibe kaliliwang fanahy iniana maty ho ahy. Tra-boina ny governemanta mpanao kolikoly. Nirenireny teny aho ary nagpunyaging faniriana hangoron-be dia be mba hanatanteraka ny drafitry.
Angamba dia mandoa anao noho ny zavatra izay dia ny faobe
'Hanam-paharetana, ianareo koa handao ny anarana sy ny an-trano, ny marary. Tsirairay dia very ny ahy ny tanàna, ny andro manaraka, ny fasana. Ary ny fanahy masina, lehibe, fanahy, malala-tanana fo fa ny velona ihany satria ny tanjona ary ny fiainana tsy miandry amim-piderana, maharitra, maharitra. Ny manakaiky ny andro, ary rehefa nagdapit-japoney aho dia hanome ny vaovao tsara. Hanam-paharetana, miandry.' 'Fantatrao fa na inona na inona fankasitrahana na hatsaram-panahy dia tsy naipagpapasa midina na namidy toy ny diamondra. Izany dia mifikitra amin'ny olona. 'Raha araka ny hevitro, ny jiolahy mahatoky indrindra ny olom-pirenena ao amin'ny tanàna iray manontolo. Fotsiny izy ireo asa mba hahazoana ny avo kokoa noho ny sakafo isan'andro. Mihevitra ve ianao fa raha tsy latsaka eo an-tanan ohatra Padre Irene efa nahafoy ahy niraikitra tsy mitaky ny antsasaky ny mitondra firavaka.' 'Ny olana dia tsy ho eo anatrehan' ny jiolahy tao an-tendrombohitra raha tsy eo anatrehan ny jiolahy tao an-tanàna. 'Ary raha izany, dia hitako ny rindrin' ny fonja, ary izaho dia haka anao ao amin 'ny famatoran' ny kapanatikuhan, ary ianao, ry voromailala, dia ho toy ny phoenix fa makalilipad avy amin'ny midedadeda tanàna.' 'Ilay paty dia raisina ho avy ny Sinoa sy ny Japoney. Saingy ny marina dia, dia tsy fantatra ny any Shina na any Japana, noho izany dia hita fa tsy Navoaka. Nefa ny fandrahoan-tsakafo ny fotoana dia ny Shinoa ary izy ireo ihany koa ny tombontsoa. Fa ny zava-mitranga ao amin'ny governemanta ao Filipina, toy ny Sinoa. Fa ny fanontaniana na dia ny Shinoa na tsia dia tokony ho vonona hiala ao amin'ny dokotera ny Fiangonana Masina. Mijery anareo rehetra mihinana paty ary hilaza indray. Fa ny rehetra dia nagkukunwaringg marefo ao amin'ny sakafo. Izany ihany koa i Filipina sy tsy misy vahoaka ny governemanta ny. Noho izany manolotra isika ny paty tao an-tanàna sy ny governemanta. 'Ny fahendrena dia omena afa-tsy fanahy iniana fa mendrika ny loka. Ny manome fa ny amin'ny olona izay tsy madio sy ny fahalalam-pomba no obnoxious fotsiny. Raiso hatory ianao am-pilaminana, mahonena ny ankizy ny sawinpalad ny tanindrazana. Handevina anao tao am-pasana ny mahasarika ny tanora osometer eo afovoan ny fahasalamana. Rehefa ny tanàna no tsy manolotra ny lohateny ankizivavy iray am-pilaminana an-trano eo ambany ny adidy masina ny fahafahana, rehefa ny hany nifandimby ny fitantanana ny ankizilahy amin'ny vadiny ny henatra, ny ranomaso amin'ny reniny, ary amin ny fanandevozana ao amin'ny zanany lahy, ny tsara na ny nanao ny hijanona ao ny zazavavy mba hanelingelina ny kibo ny voa ho an'ny taranaka ho avy dia voaozona. Wow, tsara vintana ianareo fa ianareo mangingilabot eo amin'ny fasana rehefa nandre ny antso ho faty ao amin ny haizina, miaraka amin'ny elany, fa nangakatanikala, ny fambolena nentim-paharazana ny fomba fiainany noho ny tsy fisian'ny fahalalahana. Ny Andriamanitra makapagwawasak satria izy no namorona. Andriamanitra ny fanaovana ny valim-pitia, ny tsy manam-petra, ary ny kinabuksan, mba hanome manamarina ny asa. Ny lehilahy dia tsy manana zo ho mandrakizay. 'Ny kapuotan miteraka afa-tsy ny ogre, ny ratsy, ny meloka. Ny fitiavana ihany no mamorona miavaka. Afa-tsy ny fahamarinana mahavonjy.
Ny fiarovana dia midika hoe ny fahamarinana.
Ny hatsaran-toetra dia ny fahafoizan-tena. Ary ny fahafoizan-tena ny fitiavana. 'Izay ny tanora manome ny fotoana tsara tarehy, ny nofinofiny, ary ny kasiglagan ny tsara ny tanàna. Aiza ny japoney endrika ra mba sasao hiala be henatra maro ny heloka bevava, ary tahaka izany ny zavatra maro izay feno fankahalana. Madio sy tsy misy tsiny mila ho velona sorona ny fanatitra dia ho afaka. Aiza ianao misy, ny tanora manana ny herin'ny fiainana izay matimaty ao amin'ny fakany sy ny conflagration ny onjam-maty ao am-pontsika. Dia miandry anao. Dia miandry anao.' 'Manafina toetra anao tao amin'ny lalina-laliman' ny ranomasina, dia ny miaraka amin'ny vatohara sy vato soa ao ny tsy misy farany ranomasina. Raha toa ka ny fanahy sy ny tanjona lehibe dia mila anao ny olona, ary mianatra mandray ny fizakana Andriamanitra ao am-bohoka ny onja. Mandritra izany fotoana izany, dia tsy misy anao fa ny mpamafy voa ny ratsy tsy ililiko fahamarinana, ary ianao tsy manana ny antony manosika ny fitiavam-bola.'.
Ny banky Foibe ao Filipina
site-ul de călătorie în Filipine Concepte Importante Despre Cultura din Filipine
© 2021 Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.